ကိုလူဩ: ဦးအေးမောင်၊ဗုဒ္ဓနှင်. ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ အခန်း(၄) ၊ဗုဒ္ဓ
ဒီ အခန်းကတော. တကယ်.ကို ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဗုဒ္ဓနဲ. ပက်သက်လို. အနန္တတန်ခိုးရှင် တစ်ယောက်အနေနဲ. မဟုတ်ဘဲ လူသားထဲကမဟာလူသားတစ်ယောက် အနေနဲ. ဖော်ပြထားပုံက ဗုဒ္ဓကို အမှန်တကယ်ကို ကြည်ညိုလာစေပါတယ်။
ဒီအထဲ မှာလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို. ကောင်းတဲ. အချက်တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာတိုင်းပြည် သက္ကတိုင်းသည် နိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခုဖြစ်တဲ.အကြောင်း၊ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်အုပ်စိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယခုခေတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ များအုပ်ချုပ်သကဲ.သို.ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိမ္ဗိသာရမင်း အုပ်စိုးတဲ. မာဂဓတိုင်း၊ ကောသလမင်းကြီးအုပ်စိုးသော ကောသလတိုင်းများသည် ကား ဘုရင်စနစ်ကို ကျင်.သုံးတဲ. နိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
တခြားအကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိသေးပေမယ်. ကျွန်တော် မပြောတော.ပါဘူး။ ဖတ်ကြည်.ကြပါ။
သင်၏ ဣနြေ္ဒတို.သည် ကြည်လင်လှ၏။
အရေအဆင်းသည် စင်ကြယ်၍ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ရှိ၏။
ဝက္ကလိ၊ တရားကို မြင်သောသူသည်
-သံယုတ္တနိကာယ်၊ ခန္ဒသံယုတ်- ဝက္ကလိသုတ်
(က) ပိဋကတ်မှ ဂေါတမဗုဒ္ဓ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ ဘဝဖြစ်စဉ် အကြောင်းအရာများကို ရေးသား ထားသော မြန်မာဗုဒ္ဓဝင် စာအုပ်များရှိ၏။ ထိုစာအုပ်များ၌ ပါရှိသော အချက်များကို မြန်မာဗုဒ္ဓဝါဒီတို.က အကြွင်းမဲ. လက်ခံယုံကြည်ကြမည်ဖြစ်သော်လည်း အနောက်တိုင်း ဗုဒ္ဓစာပေ သုတေသီပညာရှင်တို.က ထိုသို. လက်ခံလိုကြမည် မဟုတ်ချေ။ တစ်နည်းဆိုသော် ယိုးဒယား၊ မြန်မာ၊ သီဟိုလ်သားတို.၏ ဗုဒ္ဓဝင်ကို တိကျခိုင်မာသော ဗုဒ္ဓအတ္တုပ္ပတ္တိအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုကြမည် မဟုတ်ချေ။ အမှန်ဆိုသော် ရှေးအစဉ်အလာ ယုံကြည်ချက်များကို မျက်စိမှိတ် လက်မခံလိုဘဲ ဝေဖန်ဆန်းစစ်လိုသော ဗုဒ္ဓဝါဒီတို.သည်ပင် ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းလာ အချို.သောစကားများကို ယုံမှားသံသယရှိကြမည် အမှန်ဖြစ်၏။
ထို.ကြောင်. ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်ကို မှန်ကန်စွာ သိရှိလိုပါက ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းပြုဆရာတို. မှီငြမ်းပြုသော ပါဠိပိဋကတ်ကို ဦးစွာလေ.လာရပေမည်။ လေ.လာရာ၌ သုတေသီပညာရှင်တို.၏ အလိုအားဖြင်. ရှေးကျ၍ အထူးခိုင်မာသော ပိဋကတ်စာပေများကို ဦးစားပေး၍ လေ.လာရပေမည်။ ထိုစာပေများမှာ သုတ္တန်ပိဋကတ်မှ ပထမနိကာယ်လေးကျမ်း၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ်နှင်. အချို.ကျမ်းများနှင်. အချို.သောဝိနည်းကျမ်းများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ.ပေပြီ။
ထိုပိဋကတ်စာပေများကို နှံ.နှံ.စပ်စပ် လေ.လာပါက ဗုဒ္ဓအကြောင်း ထူးခြားသော အချက်နှစ်ရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို. သတိပြုမိမည်ဖြစ်၏။ ပထမအချက်မှာ ဗုဒ္ဓအကြောင်းအရာများနှင်. စပ်လျဉ်း၍ အချို.နေရာများ၌ ဗုဒ္ဓဝင် (ဝါ) အဌကထာကျမ်းများနှင်. ပိဋကတ်လာစကားများ မတူပဲ ကွဲလွဲနေခြင်းဖြစ်၏။ ဒုတိယအချက်မှာ ဗုဒ္ဓဝင်နှင်. အဌကထာများမှ ဗုဒ္ဓအကြောင်းအရာများသည် ထူးထွေများပြား၍ စုံလင်လှသည်နှင်.အမျှ ပိဋကတ်စာပေ၌ ဗုဒ္ဓအကြောင်း နည်းပါး၍ ပြည်.စုံခြင်းမရှိချေ။
ပိဋကတ်စာပေ၌ ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်များကို အစအဆုံး တစ်ဆက်တည်း ပြည်.စုံစွာ ပြဆိုထားသော ကျမ်းစာကို မတွေ.ရချေ။ အနည်းငယ်သောပါဠိတော်များ၌သာ ဗုဒ္ဓ၏ အချို.သောဖြစ်စဉ်များအကြောင်းကို ဖတ်ရှုရ၏။ မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ အရိယပရိယေသနသုတ် မဟာသစ္စကသုတ် စသည်တို.၌ ဘုရားလောင်း တောထွက်ပုံ ၊ တရားကျင်.ပုံနှင်. ဘုရားအဖြစ်သို. ရောက်ရှိပုံများကို လည်းကောင်း၊ ဝိနည်းပိဋကတ် မဟာဝဂ္ဂ၌ ဘုရားဖြစ်သည်မှ အရှင်သာရိပုတ္တရာနှင်. အရှင်မောဂ္ဂလန်တို. ဘုရားထံ၌ ရဟန်းပြုကြသည်အထိကိုလည်းကောင်း ၊ ဒီဃနိကာယ် မဟာပရိနဗ္ဗာနသုတ်၌ ဘုရားရှင်၏ နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်များကို လည်းကောင်း ဖော်ပြထား၏။ သို.ရာတွင် ထိုပါဠိတော်များ၌ ဗုဒ္ဓဝင် နှင်. အဌကထာများမှ များစွာသော ဗုဒ္ဓအကြောင်းအရာများကို မတွေ.ရချေ။
ပိဋကတ်စာပေ၌ ဗုဒ္ဓ၏ အတ္ထုပတ္တိကို အပြည်.အစုံ မတွေ.ရခြင်းမှာ ရှေးလူတို.က မိမိတို.ခေတ်အတွင်း ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်တို.၏ ဘဝဖြစ်စဉ်များကို စုံစုံစေ.စေ. မှတ်သားထားလေ.မရှိသောကြောင်.ဖြစ်၏။ ပုဂ္ဂိုလ်အတ္ထုပတ္တိကို ရေးသားသောအတတ်သည် ယခုခေတ်မှ ပေါ်လာသောအတတ်ဖြစ်၏။ ရှေးအိန္ဒိယ နိုင်ငံသားတို.သည် ပညာရှိတစ်ဦး၏ ဘဝအဖြစ်အပျက်များကို သူ၏စကားများလောက် ဂရုပြုလေ.မရှိကြချေ။
သို.ဖြင်. ရှေးပဝေသဏီက ဘာသာဝါဒအမျိုးမျိုးကို အစဦးစွာ ဟောပြောခဲ.သော ပုဂ္ဂိုလ်တို.၏ ဘဝဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်းများ အထင်အရှားရှိဖို.ဝေးစွ၊ သူတို.၏အမည်များသည်ပင်ပျောက်ကွယ်ခဲ.ပေပြီ။ အိန္ဒိယဘာသာရေးသမိုင်း၌ နာမည်ကျန်ရှိသော ကပိလ(Kapila)၊ ရှန်ကရ(Samkara)၊ အစရှိသည်. အနည်းငယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို. အကြောင်းကို လည်း ယခုခေတ်လူတို. စုံလင်စွာ မသိကြရချေ။ သူတို.အကြောင်းအရာနှင်.စာသော် ကျွန်ုပ်တို.သိရသော ဗုဒ္ဓ၏ အကြောင်းအရာများမှာ အတော်အတန်စုံလင်သည် ဟုဆိုရမည်။
ဗုဒ္ဓသည် ဘီစီ ၆ ရာစု (ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်းငါးရာကျော်လောက်) အတွင်း၌ဖွားမြင်တော်မူကြောင်း သုတေသီပညာရှင်အားလုံး လက်ခံယုံကြည်ကြ၏။ ထိုရာစုနှစ်မှာ တရုတ်ပညာရှိ ကွန်ဖြူးရှပ် နှင်. ဂရိပညာရှိ ပိုက်သာဂိုးရတ် တို. ဖွားမြင်သောရာစုနှစ်ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓဖွားမြင်တော်မူရာ ဒေသမှာ အိန္ဒယပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ သက္ကတိုင်းဖြစ်၏။ အိန္ဒိယနှင်. နီပေါပြည်နယ်စပ်ရှိ သက္ကတိုင်း၏ မြို.တော်မှာ ကပိလဝတ်မြို.ဖြစ်၍ ဗာရာဏသြီံမို.၏ မြောက်ဘက် မိုင်တစ်ရာခန်.အကွာ၌ တည်ရှိ၏။
ပိဋကတ်စာပေ၌ ဖော်ပြထားသော ထိုအခါက အိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်းရှိ တိုင်းကြီး ၁၆ တိုင်း အမည်စာရင်းတွင် သက္ကတိုင်း၏ အမည်ကို မတွေ.ရချေ။ ဘီစီ ၆ ရာစုခေတ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကောသလ၊ မဂဓ စသော ဘုရင်အုပ်စိုးသည်. တိုင်းပြည်ကြီးများ အပြင် သက္က, ကောလိယ, ဝဇ္ဇီစသော နိုင်ငံငယ်များရှိ၏။ ထိုနိုင်ငံငယ်များသည် ယခုခေတ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများနှင်.တူ၍ ခတ္တိယများက အုပ်ချုပ်ကြ၏။ ခတ္တိယတို.သည် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကို နာယကတင်မြောက်ပြီးလျင် အစည်းအဝေး ကျင်းပ၍ တိုင်းပြည်ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ကြ၏။
ပိဋကတ်စာပေ၌ ဗိမ္ဗိသာရ, အဇာတသတ် စသော ဘုရင်အမည်များကို နာမဝိသေသနပုဒ်များဖြင်. အပြည်.အစုံ ထပ်တလဲလဲ ပြဆိုထား၏။ ဗိမ္ဗိသာရမင်းကို မဂဓတိုင်းရှင် သေနိယမည်သော ဗိမ္ဗိသာရမင်းဟုခေါ်၍ အဇာတသက်ကို ဝေဒဟီ မိဖုရား၏ သား မဂဓတိုင်းရှင် အဇာတသက်မင်းဟု ဖော်ပြထား၏။ ဗုဒ္ဓ၏ ခမည်းတော်အား ဘုရင်သုဒ္ဓေါဒန ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို မူ ပိဋကတ်နှစ်နေရာတည်း(ဒီဃနိကာယ် မဟာပဒါနသုတ် နှင်. ခုန္ဒကနိကာယ် ဗုဒ္ဓဝံသ) ၌သာ ဖော်ပြထား၏။ အကယ်ပင်သာကီဝင်မင်းဖြစ်သော ဘဒ္ဒိယကိုမူ ဝိနည်းပိဋကတ်၌ ဘဒ္ဒိယ သက္ကရာဇာဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ထား၏။
ဘုရားအလောင်းသည် တောမထွက်မှီက များစွာသောစည်းစိမ်ချမ်းသာ ခံစားခဲ.ကြောင်း ဗုဒ္ဓ၏ စကားများဖြင်.သိအပ်၏။ "အို မာဂဏ္ဍိယ၊ ငါသည် သုံးဆောင်သော ပြာသာဒ်တို.၌ တီးမှုတ်မျိုးစုံတို.ဖြင်. တင်.တယ်စွာ ခံစားစံစားလျက် နေခဲ.၏။" (မဇ္ဈိမနိကာယ် မာဂဏ္ဍိယသုတ်)။ "ရဟန်းတို.၊ ငါသည် ချမ်းသာစွာ၊ နူးညံ.သိမ်မွေ.စွာ နေရ၏။ မိုးလေးလပတ်လုံး ပြသာဒ်မှ အောက်သို.မသက်ဆင်းဘဲ နေရ၏။" (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ တိကနိပါတ်- သုခုမာလသုတ်)။ ပိဋကတ်စာပေ၌ ဤစကားများထက်ပို၍ ဗုဒ္ဓဝင်များမှာ ကဲ.သို. ဘုရားလောင်း၏ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ခံစားမှုကို ချဲ.ထွင်ပြထားခြင်းမရှိချေ။
"ရဟန်းတို.၊ ငါသည် ဘုရားမဖြစ်သေးမီ ပထမအရွယ်က ဤသို.ကြံ၏။ မသိနားမလည်သော သာမန်လူသည် မိမိကိုယ်တိုင် တစ်နေ.တွင် အိုရဦးမည် ဖြစ်ပါလျက် သူအိုတစ်ဦးကို မြင်လျင် စိတ်မသက်မသာ စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းဖြစ်တတ်၏။ ငါသည် ဤသို. ဖြစ်ရန် မသင်.လျော်ပါတကား။ ဤသို.တွေးတောရင်း ငါ၏ပျိုမျစ်သောအရွယ်၌ တက်ကြွနေသောစိတ်သည် ကျဆင်းပျောက်ကွယ်ခဲ.၏။" (အဂုင်္တ္တရနိကာယ်, တိကနိပါတ်, သုခုမာလသုတ်)
"ရဟန်းတို.၊ ငါသည် ဘုရားအဖြစ်သို. မရောက်မီက ဤသို.အကြံဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင်. ငါသည် ဇာတိသဘော ရှိသည်ဖြစ်ပါလျက်၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း သဘောရှိသည်ဖြစ်ပါလျက် ညစ်ညူးခြင်းသဘောရှိသည် ဖြစ်ပါလျက် ထိုညစ်ညူးခြင်း သဘောကိုသာလျှင် ရှာဘိသနည်း။ ငါသည် ဇာတိမရှိရာ၊ မအို၊ မနာ၊ မသေရာ မြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကို ရှာအံ.ဟူ၍ အကြံဖြစ်၏။" (မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ အရိယပရိယေသနသုတ်)
အချို.သော သုတ္တန်ဒေသနာများ၌မူ အိုခြင်း၊နာခြင်း၊ သေခြင်းကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြောင်းပင် မလာဘဲ လူ.ဘောင်ကို ငြီးငွေ.၍ တောထွက်ကြောင်း ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်မိန်.ကြားသော စကားလာ၏။ အောက်ပါစကားသည် များစွာသော သုတ္တန်တို.၌တွေ.ရသော ဗုဒ္ဓစကားဖြစ်၏။
"ရဟန်းတို.၊ ငါ.အား ဤသို.အကြံဖြစ်၏။ အိမ်ရာထောင်သော လူတို.ဘောင်၌ နေရခြင်းသည် ကျဉ်းမြောင်းကျပ်တည်း၏။ မြူမှုန်ထူသော ခရီးနှင်.တူ၏။ အိမ်၌နေသော သူသည် စင်စစ် မြတ်သောအကျင်.ကို ကျင်.ရန်မလွယ်ချေ။ ငါသည် ဆံမုတ်ဆိတ်ကို ပယ်ပြီးသော် ဖန်ရည်စွန်းသော အဝတ်ကို ဝတ်ရုံ၍ ရဟန်းပြုရမူကောင်းလေစွတကားဟု အကြံဖြစ်၏။" (မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ မဟာသစ္စကသုတ်နှင်. အခြားသုတ်များ)
ထိုခေတ်က အိန္ဒိယပြည်၌ တောထွက်၍ ရဟန်းပြုခြင်းသည် ရှေးပဝေသဏီကစ၍ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို. လိုက်နာသောလမ်းစဉ်ဖြစ်၏။ မိဘများက သဘောမတူဘဲ တားမြစ်ထားပါလျက် တောထွက်သောသူများအကြောင်း အဌကထာများ၌ ဖော်ပြထား၏။ ဘုရားအလောင်းသိဒ္ဓတ္ထသည် ထိုသို.သော ပိုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပိဋကတ်၌လာ၏။
မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ အရိယပရိယေနသုတ်၊ အဟာသစ္စကသုတ် နှင်. အခြားသုတ်များတွင် ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က "ငါသည် မည်းနက်သော ဆံပင်ရှိ၍ ငယ်ရွယ်ပျိုမျစ်သောပထမအရွယ်၌ အမိအဖတို.သည် သဘောမတူသဖြင်. မျက်ရည်ရွှဲစု ငိုယိုနေကြစဉ် ဆံမုတ်ဆိတ်ကိုပယ်၍ ဖန်ရည်ဆိုးသော အဝတ်ကို ဝတ်ပြီးလျင် လူ.ဘောင်မှ ရဟန်းဘောင်သို. ကူပြောင်းခဲ.ပေသည်" ဟုမိန်.ကြားတော်မူ ကြောင်းပြဆိုထား၏။ ဒီဃနိကာယ်သောဏဒန္တသုတ်နှင်. ကူဋဒန္တသုတ်များ၌လည်း ဗြာဟ္မဏ ဆရာနှစ်ဦးက ရဟန်းဂေါတမသည် ငယ်စဉ်က မိဘတို. သဘောမတူသဖြင်. ငိုယိုနေကြစဉ် ရဟန်းပြုခဲ.သည်ဟု ပြောဆိုကြကြောင်း ဖော်ပြထား၏။
မည်သို.ဖြစ်စေ အထက်ကပြဆိုခဲ.သော ဗုဒ္ဓဝင်နှင်. ပိဋကတ် ကွဲလွဲဆန်.ကျင်မှုများမှာ ဗုဒ္ဓ၏တရားများနှင်. မသက်ဆိုင်သောကြောင်. ဗုဒ္ဓဓမ္မ လေ.လာသူတို.အဖို. အရေးမကြီးလှချေ။ အရေးကြီးသည်ကား ဗုဒ္ဓသည် မည်သို.သော ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ် သူမြတ်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်သိရှိရန်ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓသည် လူ.ဘဝ၊ လူ.လောက ပြဿနာ များကို မည်သို. ရှုမြင်သုံးသပ်သည်။ လူတို.၏ ရှေးအစဉ်အလာ ယုံကြည်ချက်များအပေါ် မည်သို.ဆုံးမသည် စသည်တို.မှာ ဗုဒ္ဓဓမ္မ လေ.လာရာ၌ ကျွန်ုပ်တို. သိရှိရန်မုချလိုအပ်သော အချက်များဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓအကြောင်း ပါဠိတော်များကို မှီငြမ်းပြု၍ ဤအချက်များကို တတ်နိုင်သမျှ စုံစုံစေ.စေ. ဖော်ပြပါအံ.။
ဗုဒ္ဓသည် မိုးရာသီ၌ နားနေ၍ အခြားအခါကာလများတွင် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို. ခရီးလည်.လည်ပြီးလျင် တရားဟောတော်မူလေ.ရှိ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ၌မူ သာဝတ္တိ၊ ဝေသာလီ စသော မြို.ကြီးများ၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ မဇ္ဈိမနိကာယ် အရိယပရိယေသန သုတ်၏ နိဒါန်း၌ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္တိမြို.၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ မဇ္ဈိမနိကာယ် အရိယပရိယေသန သုတ်၏ နိဒါန်း၌ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္တိမြို.၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် တစ်နေ.တာ မည်သို. ကုန်လွန်စေပုံကို ဖော်ပြထား၏။
တစ်နေ.သော နံနက်စောစော၌ ဗုဒ္ဓသည် သင်းပိုင်ကို ပြင်ဝတ်၍ သပိတ်သင်္ကန်းကို ယူပြီးလျင် မြို.တွင်းသို. ဆွမ်းအလို.ငှာ ကြွသွား၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတို.သည် အရှင်အာနန္ဒာအား ဘုရားရှင်၏ တရားစကားကို မိမိတို. မကြားနာရသည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်၍ ကြားနာလိုကြောင်း လျှောက်ကြ၏။ အရှင်အာနန္ဒာက ရဟန်းတို.အား ဒမ္မိက ပုဏ္ဏား၏ ကျောင်းသင်္ခမ်းသို.သွား၍ နေကြရန်ပြော၏။ ရဟန်းတို.သည် ထိုကျောင်းသို. သွားကြ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ဆွမ်းစားပြီးလျင် အရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်၍ ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းသို. ကြွသွားတော်မူ၏။ ထိုကျောင်း၌ တစ်နေကုန် နေတော်မူပြီးလျင် အရှင်အာနန္ဒာနှင်.အတူ ရေချိုးဆိပ်သို. ကြွသွား၍ ရေသပ္ပာယ်တော်မူ၏။ ရေသပ္ပာယ်ပြီးသောအခါ အရှင်အာနန္ဒာက ဘုရားရှင်အား ဒမ္မကပုဏ္ဏား၏ကျောင်းသို. ကြွတော်မူရန် ပန်ကြား၏။ ဗုဒ္ဓသည် ထိုကျောင်းသို. ကြွသွား၏။
ရဟန်းတို.သည် တရားစကားဖြင်. စည်းဝေးနေကြ၏။ ဗုဒ္ဓသည် တံခါးမုခ်အပြင် ဘက်၌ရပ်လျက် စကားအဆုံးကို ဆိုင်းငံ.နေတော်မူ၏။ စကားဆုံးလတ်သော် ချောင်းဟန်.၍ တံခါးရွက်ကို ခေါက်၏။ ရဟန်းတို.က တံခါးကိုဖွင်.၍ ဗုဒ္ဓသည် ခင်းထားအပ်သော နေရာ၌ ထိုင်ပြီးလျင် " ရဟန်းတို.၊ ယခုကြွလာသော အခါ အဘယ်စကားဖြင်. သင်တို.စည်းဝေး၍ ဟောပြောနေကြကုန်သနည်းဟု လျှောက်ကြသော် ဗုဒ္ဓသည် မိမိ ဘုရားမဖြစ်မီက ကြုံတွေ.ခဲ.ရပုံများကို ပြောပြလို၍ အရိယပရိယေတနသုတ်ကို ဟောတော်မူ၏။
ထိုတရားပွဲများ၌ တခါတစ်ရံ ရဟန်းတစ်ပါးသည် နေရာမှထ၍ လက်အုပ်ချီကာ ဗုဒ္ဓအား အခွင်.ပန်ကြားပြီးသည်.နောက် မိမိသိလိုသောအချက်ကို မေးလျှောက်လေ.ရှိ၏။ တရားပွဲများသည် အတော်ညဉ်.နက်မှပြီးဆုံး၏။ ဘုရားရှင် ပင်ပန်းညောင်းညာသောအခါ အရှင်အာနန္ဒာ၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာစသော တပည်.မထေရ်ကြီးများက ဆက်လက်၍ ဟောပြောကြ၏။
ဗုဒ္ဓနှင်. ရဟန်းသံဃာတို.၏ စည်းဝေးပွဲများသည် အလွန်တိတ်ဆိတ်သော စည်းဝေးပွဲများဖြစ်၏။ သာမညဖလသုတ်၌ အဇာတသတ်မင်းသည် ဘုရားရှင်ကို ဖူးမြှော်ရန် ဆရာဇီဝကနှင်.အတူ ကျောင်းတော်သို. သွား၏။ အချိန်ကား ညချမ်းအချိန်ဖြစ်၏။ ဘုရင်သည် ကျောင်းအနီးသို. ချဉ်းကပ်မိသောအခါ ကြက်သီးမွေးညင်းထ၍ ထိတ်လန်.သွား၏။ အဘယ်ကြောင်.ဆိုသော် ထိုအချိန်၌ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းသံဃာ ၁၅၀၀ နှင်.အတူ ကျောင်းတိုက်ထဲ၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူသော်လည်း ချောင်းဆိုးသံ ချေသံ တစ်ချက်မျှမကြားရဘဲ အလွန်တိတ်ဆိတ်နေသောကြောင်.ဖြစ်၏။ ဇီဝကက အားပေးနှစ်သိမ်.မှ အဇာတသက်မင်းသည် ကြောက်စိတ်ပြေ၍ ကျောင်းထဲသို.ဝင်ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓကို ဖူမြော်လေသည်။
ဗုဒ္ဓသည် တိတ်ဆိတ်မှုကို နှစ်သက်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ဆွမ်းစားပြီးလျှင် တောထဲသို. ကြွသွား၍ သစ်ပင်များအောက်၌ နေတော်မူလေ.ရှိ၏။ ရဟန်းတို.အား စကားပြောလျင် တရားစကားကိုသာပြောရန်၊ သို.မဟုတ် ဆိတ်ဆိတ်နေရန် မကြာခဏသတိပေး၏။ တစ်ခါသော် ဗုဒ္ဓကို ဖူးမြော်ရန် ရောက်လာကြသော ရဟန်းတို.သည် အချင်းချင်း အော်ဟစ်ပြောဆို၍ ဆူညံလှသဖြင်. ကျောင်းမှ နှင်ထုတ်ခံကြရ၏(မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ စတုမသုတ်)။ တိတ်ဆိတ်မှုကို ဗုဒ္ဓနှစ်သက်ကြောင်း လူအများသိကြ၏။ ပရိဗိုဇ်တို.သည် ဆူညံစွာ စကားပြောနေကြစဉ် အဝေးမှလာသော ဗုဒ္ဓဝါဒီတစ်ဦးကို မြင်သော် အချင်းတို. အသံမပြုကြကုန်လင်.၊ ဗုဒ္ဓ၏တပည်.သည် လာနေ၏။ သူတို.သည် တိတ်ဆိတ်မှုကို နှစ်သက်၏ ဟု အချင်းချင်း သတိပေး၍ ဆိတ်ဆိတ်နေကြ၏။(အင်္ဂုတ္တရ-ကိံဒိဌိကသုတ်)
ဗုဒ္ဓ၏ ရုပ်သွင်ပြင် လက္ခဏာကို ယခုခေတ် လူတို.စိတ်ကူဖြင်. ခန်.မှန်းကြည်.ရန်ခဲယဉ်း၏။ အဘယ်ကြောင်.ဆိုသော် ရှေးအကျဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ဆင်းတုတော်များသည် ဂရိ(ခေါမ) လက်ရာများကို အခြေပြုထား၍ ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသည်.နောက် နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာသည်.တိုင်အောင် ဗုဒ္ဓရုပ်တုများကို ထုလုပ်ကိုးကွယ်သော အလေ.အထမရှိချေ။ အင်္ဂလိပ် ပညာရှင် ဆာချား(စ) အဲလိယော. ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ဖော်ပြရမည်ဆိုသော် " သူတော်သူမြတ်အသွင် ပြထားသော ဗုဒ္ဓရုပ်တုများ ကို ကြည်.ခြင်းအားဖြင်. ဗုဒ္ဓ၏ ရုပ်လက္ခဏာသွင်ပြင်ကို အမှန်အတိုင်း စိတ်ထဲ၌ မြင်လာနိုင်လိမ်.မည်ဟု ကျွန်ုပ် မထင်ပါ။ အိန္ဒိယပြည်ဆားနတ်အရပ်၌ တွေ.ရသော လုလင်ပျိုအသွင် ထုလုပ်ထားသည်. ဗုဒ္ဓရုပ်တုများသည် သာလျှင် ဗုဒ္ဓ၏ နဂိုဥပဓိရုပ်ကို အတော်အတန် မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြထားသည်ဟု ကျွန်ပ်ထင်ပါသည်။ ထိုရုပ်တုများသည် ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ ရုပ်အင်္ဂါလက္ခဏာများကို တိကျမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြထားသည်ဟု မဆိုနိုင်စေကာမူ သန်မာတောင်.တင်းသော ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင်. အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ရှိသော နိပေါမင်းသားပျို၏ ရုပ်လက္ခဏာ ပေါ်ထင်လျက်ရှိပါသည်။ ဂေါတမသည် ဗုဒ္ဓ၊ သို.မဟုတ် စကြဝတေးမင်းဖြစ်ရန် ဇာတာပါသည်ဆိုသော စကားမှာ ယုတ္တိရှိ၏။" (Sir Charles Eliot: Hindduism & Buddhism- Vol.I, pp.171)
ဗုဒ္ဓသည် ကျန်းမာတောင်.တင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း ပိဋကတ်စပေ၌ထင်ရှား၏။ ဘုရားမဖြစ်မီက ခြောက်နှစ်တိုင်တိုင် ပြင်းထန်သောအကျင်.ကို ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ ကျင်.နိုင်ခဲခြင်း၊ အသက် ၈၀ ထိ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို. ခြေလျင်ခရီးလည်.လည်၍ တရားဟောပြောခြင်း၊ အိုမင်းသောအရွယ်၌ ရောဂါဝေဒနာ အပြင်းအထန်ခံစားပြီးသည်.နောက်၌ပင် မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးသော ကုသိနာရုံသို. ခြေလျင်ခရီးကြွသွားခြင်း စသည်တို.ကို ထောက်ချင်.၍ ဗုဒ္ဓသည် ကိုယ်ခန္ဒာ အထူးကြံ.ခိုင် တောင်.တင်းကြောင်းယုံမှားဖွယ်မရှိချေ။
ထိုမျှ ထူးထူးခြားခြား ကိုယ်လက်ကျန်းမာတောင်.တင်းမှုသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်. ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓသည် အစားအသောက်၌ မယုတ်မလွန် ခြိုးခြံ၏။ " ရဟန်းတို.၊ ငါသည် ညစာမစားရသောကြောင်. ကျန်းမာ၍ အနာရောဂါကင်း၏။ ကိုယ်လက်ကြံ.ခိုင်၍ ချမ်းသာစွာနေရ၏" မဇ္ဈိမ နိကာယ်၊ ကိဋာဂီရိသုတ်)။ လောက၌ကျန်းမာ၍ အသက်ရှည်သောသူတို.သည် အများအားဖြင်. ဘဝရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခုရှိ၍ မနားမနေ အလုပ်လုပ် သောသူများ ဖြစ်၏။ (ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းကို သွားသတိရပါတယ်။ Blog Post တင်သူ)
ဗုဒ္ဓသည် လူသတ္တဝါတို.ကို သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ ကယ်ချွတ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနီးသော အခါ၌ပင် သုဘဒ္ဒါရဟန်းအား ဟောပြောဆုံးမတော်မူခဲ.သေးသည် မဟုတ်ပါလော။
ဗုဒ္ဓအား အထူးကျန်းမာ အသက်ရှည်စေသော အဓိကအကြောင်းတရားမှာ ကိလေသာမီးအားလုံး ငြိမ်းသတ်ပြီး၍ ထာဝရ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်၏။ တစ်ခါသော် ဗုဒ္ဓသည် အာဠဝီပြည် နွားတို.သွားရာဖြစ်သော လမ်းနံဘေးရှိ ရင်းတိုက်တောအတွင်း သစ်ရွက်အခင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ဟတ္ထာအာဠဝက မင်းသားသည် လှည်.လှည်သွားလာရင်း ဗုဒ္ဓကိုမြင်လေသော် အနီးသို.ချဉ်းကပ်ပြီးလျင် "မြတ်စွာဘုရား၊ အရှင်ဘုရားသည် ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်တော် မူရပါ၏လော" ဟုမေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက " မင်းသား၊ ငါသည် ချမ်းသာစွာ အိပ်ရပေသည် "ဟု ပြန်ပြော၏၊
ထိုအခါ မင်းသားသည် များစွာအဲ.ဩ၍ "အရှင်ဘုရား၊ ယခုအချိန်အခါသည် ဆောင်းဥတုဖြစ်၍ အလွန်အေးချမ်းလှပါ၏။ မြေသည် နွားခွာရာတို.ဖြင်. ကြမ်းတမ်းလှပါ၏။ သစ်ရွက်အခင်းသည် ပါးလွန်းလှပါ၏။ သစ်ပင်မှ သစ်ရွက်တို.သည် ကျဲရရဲ ရှိကြပါကုန်၏။ အရပ်လေးမျက်နှာမှ အေးမြသော လေတိုက်ခတ်နေ၍ ဆီးနှင်းတို. တဖွဲဖွဲကျလျက်ရှိပါ၏။ သို.ဖြစ်ပါလျက် ငါသည် ချမ်းသာစွာအိပ်ရသည် ဟု အရှင်ဘုရား မိန်.တော်မူဘိ၏" ဟုလျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက လောက၌ ကာမဂုဏ် ခံစား၍ နူးညံ.သောနေရာ၌ အိပ်ရသော်လည်း ကိလေသာမီး တောက်လောင်နေသောသူသည် ချမ်းသာစွာအိပ်ရမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိမှာ ကိလေသာ ရာဂမီး ပယ်သက်ပြီးပြီဖြစ်၍ မည်သည်.နေရာမျိုး၌မဆို ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်ရကြောင်း မိန်.တော်မူလေသည်။ (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ တိကဒဟတ္ထာဠဝကသုတ်)
ဗုဒ္ဓ၏ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုသည် ရုပ်လက္ခဏာ အဆင်းသဏ္ဌာန်၌ အမြဲထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေမည်ဖြစ်၏။ သို.ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓကို ပထမအကြိမ် တွေ.မြင်ရသော ဥပကတက္ကတွန်းက "ငါ.ရှင် ၊ သင်သည် မည်သူဖြစ်သနည်း၊ သင်၏ ဣနြေ္ဒတို.သည် ကြည်လင်လှ၏။ အရေးအဆင်းသည် စင်ကြည်၍ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ရှိ၏" ဟု ဆို၏။ ဗုဒ္ဓကို ဆေးဖော်ကြောဖက် မလုပ်ဘဲနေရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးသည် ဗုဒ္ဓကို မြင်ရုံနှင်.ပင် မိမိတို.၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မေ.လျော.၍ ခရီးဦးကြိုပြုကြ၏။
ဗုဒ္ဓ၏ တင်.တယ်ခံညားသော ဥပဓိရုပ်ကြောင်. တစ်ကြိမ်မြင်ကာမျှနှင်. ကြည်ညိုသောသူများ ရှိသည်.နည်းတူ ဗုဒ္ဓ၏ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ် သတင်းကို ကြားကာမျှနှင်. ကြည်ညိုသောသူများမှာလည်း မနည်းလှချေ။ ပေါက္ခရဿတီ, သောဏဒန္တ စသော အလွန်ဇာတ်ကြီး၊ မာနကြီးသည်. ဗြဟ္မာဏခေါင်းဆောင်တိုသည်ပင် ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ကြားရုံမျှနှင်. သွားရောက်ဖူးတွေ.လိုသော ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာကြ၏။ ပါဠိပိဋကတ်၌ ဗုဒ္ဓအား အထူးလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြည်ညိုသော ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာ ဗြဟ္မာယုအမည်ရှိ ဇာတ်ကြီး ဗြဟ္မာဏတစ်ဦးနှင်. ပသေနဒီကောသလမင်းတို. ဖြစ်၏။ သူတို.သည် ဗုဒ္ဓ အထံသို.လာ၍ ဖူးမြော်သောအခါ၌ ဗုဒ္ဓ၏ ခြေတို.ကို လက်ဖြင်.ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်၍ ပါးစပ်ဖြင်.အထပ်ထပ် နမ်းရှုပ်ကြလေသည်။ (မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ ဗြဟ္မာယုသုတ်နှင်. ဓမ္မစေတိယသုတ်)
ကောသလမင်းသည် ဓမ္မစေတိယသုတ်၌ ဗုဒ္ဓကို လူတို.မည်မျှကြည်ညိုလေးစားကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ဗုဒ္ဓ၏ တရားပွဲ၌ တရားနာပရိတ်သက်မှာ ဗုဒ္ဓကို အလွန်လေးစား၍ တိတ်ဆိတ်စွာ တရားနာကြသောကြောင်. တစ်စုံတစ်ယောက် ချောင်းဟန်.သံ၊ တံတွေးထွေးသံကို ဘယ်အခါမျှ မကြားရပါ။ တစ်ခါသော် မိမိသည် မှူးမတ်ဗိုလ်ပါများနှင်. ခရီးထွက်သွား၍ ညစခန်းချသောအခါ ဣသိဒတ္တနှင်. ပုရာဏအမည်ရှိ အမတ်ကြီးနှစ်ဦးသည် မိမိတို.၏ အရှင်သခင် ဘုရင် ရှိရာဘက်သို. ခြေပြု၍ ဗုဒ္ဓရှိရာအရပ်ကို ကားခေါင်းပြုလျက် အိပ်ကြပါသည်ဟု လျှောက်ထား၏။
ပရိဗိုဇ်တစ်ဦးကလည်း ရဟန်းဂေါတမသည် အရာမက များစွာသော ပရိသတ်အားတရားဟောနေစဉ် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူမျှ ချေဆတ်ခြင်း၊ ချောင်းဟန်.ခြင်း မပြုဘဲ ရိုသေစွာ တရားကြားနာကြပါသည်။ သိက္ခာချ၍ လူထွက်သော တပည်.တို.သည် ရဟန်းဂေါတမ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသာလျှင် ဆိုလေ.ရှိပါသည်။ သူတစ်ပါးကို မကဲ.ရဲ.ဘဲ မိမိတို.ကိုယ်ကိုသာ ကဲ.ရဲ.ကြပါသည်ဆို၏။(မဇ္ဈိမနိကာယ၊ မဟာသကုလုဒါယီသုတ်)
ဤသို.များစွာသောလူတို.၏ ကြည်ညိုလေးစားခြင်း ခံရသော်လည်း ဗုဒ္ဓသည် မိမိအား လွန်လွန်ကဲကဲ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကြည်ညိုမှုကို လုံးဝမလိုလားချေ။ မိမိအား အလွန်အမင်း ကြည်ညိုသော ဝက္ကလိရဟန်းအား မိန်.ကြားချက်သည် ရှင်းလင်းပြတ်သား၏။ "ဝက္ကလိ၊ ဤအပုပ်ကောင်ကို ဖူးမြင်ခြင်းဖြင်. အဘယ်အကျိုးရှိမည်နည်း။ ဝက္ကလိ၊ တရားကိုမြင်သောသူသည် ငါဘုရားကို မြင်သည်မည်၏။" (သံယုတ္တနိကာယ်၊ ခန္ဒသံယုတ်-ဝက္ကလိသုတ်)
(တော်တော် စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ. အချက်ပဲ။ ကျွန်တော်တို. လည်း ဘုရားရုပ်တုရှေ.မှာ ဘုရားကို ရှိခိုးနေကြပေမဲ., ဗုဒ္ဓရဲ. ဒီစကားကို ကြားလိုက်ရတော. တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်။ Blog Post တင်သူ)
စင်စစ်ဗုဒ္ဓသည် ကမ္ဘာသမိုင်း၌ အာဏာရှင်၊ နိုင်ငံရေး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ အားပေးလေ.ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှုကို အတိအလင်း ဆန်.ကျင်သော ရှေးဦးပထမ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ဆိုကမှားမည်မဟုတ်ချေ။ ဤအကြောင်းနှင်.ပတ်သက်သော ဗုဒ္ဓမိန်.ကြားချက်များကို ရှေ.၌ပြဆိုပါအံ.။
ဗုဒ္ဓသည် မိမိအား အလွန်အမင်း ချီးကျူးပူဇော်မှုကိုလည်း မနှစ်သက်ချေ။ တစ်ခါသော် ဗောဓိမင်းသားသည် ဗုဒ္ဓအား၊ နန်းတော်သို. ဆွမ်းစားရန် ပင်.ဖိတ်၍ ဗုဒ္ဓကြွလာမည်.လမ်း၌ အဖိုးတန် ကမ္ဗလာပုဆိုးဖြူကို ခင်းထား၏။ ဗုဒ္ဓသည် ကြွလာ၍ ပုဆိုးဖြူခင်းထားသည်ကို မြင်သော် ရှေ.ဆက်မသွားဘဲ ရပ်တန်.၍နေ၏။ မင်းသားက ပုဆိုးဖြူအခင်းအားလုံးကို ရုပ်သိမ်းပြီးသောအခါမှ နန်းတွင်းသို. ဝင်တော်မူ၏။ (မဇ္ဈိမ နိကာယ်၊ ဗောဓိရာဇကုမာရသုတ်)
လူအများ၏ ချီးကျူးပူဇော်ခြင်း ခံရသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဗုဒ္ဓသည် မိမိကိုယ်ကို နှိမ်.ချ၍ ပြောလေ.ရှိ၏။ ပရဗိုဇ်တစ်ဦးက ဗုဒ္ဓသည် အစစအရာရာ၌ ခြိုးခြံစွာကျင်.နိုင်ပါပေသည်ဟု ချီးကျူး၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက မိမိ၏ခြို.ခြံစွာကျင်.မှုမှာ အချို.သော တပည်.ရဟန်းတို.က မိမိထက်သာလွန်၍ ခြိုးခြံစွာ နေထိုင်စားသောက်ကြပါသည်ဟု မိန်.ကြား၏(မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ မဟာသကုလဒါယီသုတ်)။ တစ်နေ.သော ညနေချမ်း၌ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းများနှင်.အတူ ထိုင်လျက်ရှိစဉ် " ရဟန်းတို.၊ သင်တို.သည် အကယ်၍ ငါ၌ ကိုယ်နှင်.နှုတ်စပ်သော အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာ တွေ.မြင်ပါက ငါ.အား လျှောက်ထားကြကုန်လော" ဟုမိန်.တော်မူ၏။ (သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ် ၊ ဝဂီသသုတ်)
ပိဋကတ်စာပေ၌ ဗုဒ္ဒ၏ စိတ်သဘောထား မြင်.မြတ်မှု၊ သနားကြင်နာမှု၊ ထောက်ထားစာနာမှုစသော ဂုဏ်များကို အထူးပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသော ပါဠိတော်မှာ ဒီဃနိကာယ်မှ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်ဖြစ်၏။ ဤနေရာ၌ ဗုဒ္ဓ၏ စိတ်ဓာတ်မြင်.မြတ်မှု ထင်ဟပ်နေသော နောက်ဆုံးမိန်.ကြားချက်များကို ဖော်ပြပါအံ.။
ဗုဒ္ဓသည် ရွှေပန်းထိမ်သား စုန္ဒ၏ ဝက်သားဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးပြီးနောက် ဝမ်းသွေးသွန် ရောဂါ အပြင်းအထန် ခံစားရ၏။ သို.ရာတွင် စုန္ဒအား စိတ်မကောင်း မဖြစ်စေလိုသောကြောင်. ဘုရားရှင်နောက်ဆုံးဘုဉ်းပေးသောဆွမ်းသည် အခြားဆွမ်းတို.ထက် အကျိုးအာနိသင် ကြီးမားသည်ဟူ ဘုရားရှင်၏ မျက်မှောက်မှ ကြားလိုက်ရကြောင်း ပြောပြ၍ စုန္ဒ၏ နှလုံးမသာခြင်းကို ဖြေဖျောက်ရန် အရှင်အာနန္ဒာအား မှာကြားတော်မူခဲ.၏။
အရှင်အာနန္ဒာက ဗုဒ္ဓသည် ပရိနိဗ္ဗာန် မစံဝင်မီ တပည်.သံဃာတို.အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ မှာကြားတော်မူခဲ.လိမ်.မည်ဟု မိမိယုံကြည်ပါကြောင်း လျှောက်ထား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓမိန်.ကြားသောစကားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။
" အာနန္ဒာ၊ ငါဘုရားအား သင်တို. အဘယ်ကြောင်. ဤမျှလောက် တောင်.တနေဘိသနည်း။ ငါသည် တရားဓမ္မကို အကြွင်းမဲ. ဟောကြားခဲ.ပေပြီ။ သင်တို.သည် ငါ၏ နောက်လိုက်ဖြစ်သည်၊ ငါသည် သင်တို.၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ဟု ငါမယူဆခဲ.ချေ။ အာနန္ဒာ ၊ ငါသည် အိုမင်း၍ ဘဝခရီး၏ အဆုံးပိုင်းသို. ရောက်ရှိနေပေပြီ။ ထို.ကြောင်. သင်တို.သည် မိမိကိုယ်ကိုသာ မှီခိုကိုးကွယ်၍ နေကြကုန်လော။ တရားမှတစ်ပါး မှီခိုကိုးကွယ်ရာ မရှိဘဲ တရားသာလျင် မှီခိုကိုးကွယ်ရာ ရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော"
တစ်နေရာ၌ အရှင်သာရိပုတ္တရာက သဗ္ဗညုတဥာဏ်အရာ၌ မြတ်စွာဘုရားထက် သာလွန်၍သိသော သမဏဗြာဟ္မာဏသည် ရှေးကမရှိခဲ.၊ နောင်ရှိမည်လည်း မဟုတ်၊ ယခုလည်း မရှိဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက " သာရိပုတ္တရာ၊ သင်သည် ပွင်.ပြီး ပွင်.ဆဲပွင်.လတ္တံ.သော ဘုရားရှင်တို.၏ စိတ်ကို သင်၏ ဥာဏ်ဖြင်.ခွဲခြားမသိပါဘဲလျက် အဘယ်ကြောင်. ဤသို. ကြီးကျယ်ခံ.ညားလှသော၊ တိကျသော စကားကို ဆိုဘိသနည်း" ဟု မိန်.တော်မူ၏။
ထို.နောက် ကုသိနာရုံဥယျာဉ်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ခါနီးတွင် နတ်ဗြဟ္မာတို.သည် ဤသို.ပူဇော်ကာမျှဖြင်. ငါဘုရားအား မြတ်နိုးသည် မမည်သေး။ အကြင်ဥပါသကာ ဥပသကာမတို.သည်လည်းကောင်း၊ ရဟန်းယောက်ျား၊ ရဟန်းမိန်းမတို.သည် လည်းကောင်း ငါဟောကြားအပ်သော တရားနှင်.အညီ ကျင်.ကြံနေထိုင်၏။ ထိုသူတို.သည် သာ လျှင် ငါဘုရားကို ချစ်ကြည်မြတ်နိုး ရှိခိုးပူဇော်ကြသည်မည်၏" ဟုမိန်.တော်မူ၏။ အရှင်အာနန္ဒာက " အရှင်ဘုရား၊ကိုယ်တော်မြတ် နိဗ္ဗာန်လားခဲ.သော် အလောင်းတော်အား ကျွန်ုပ်တို. ပြုဖွယ်ကိစ္စကို အဘယ်သို.ပြုရပါအံ.နည်း" ဟုမေးလျှောက်၏။ ထိုအခါ၌ ဗုဒ္ဓက " အာနန္ဒာ၊ ငါဘုရား၏အလောင်းတော်ကို မီးပူဇော်ခြင်းစသည်တို.၌ သင်တို.အကြောင်.ကြကုန်လင်.။ မိမိ၏ အစီးအပွားဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ရခြင်းငှာ သာ များစွာ လုံ.လပြုကြကုန်လော" ဟု မိန်.တော်မူ၏။
ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်ခါနီး၌ ဗုဒ္ဓသည် အရှင်အာနန္ဒာအား " အာနန္ဒာ၊ ငါ၏ တပည်. ရဟန်းသံဃာတို.သည် ငါပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်သောအခါ ငါဘုရားမရှိပြီ၊ ငါလွန်ပြီဟုထင်မှတ်ကြပေလိမ်.မည်။ ထိုသို. မမှတ်သင်.။ ငါဟောသောတရားသည် ငါလွန်သောအခါ သင်တို.၏ ဆရာဖြစ်လတ္တံ.။ ထို.ကြောင်. ငါလွန်သောအခါ ငါရှိသည်ဟုသာ ကောင်းစွာမှတ်၏" ဟု မိန်.ကြား၍ ရဟန်းတို.အား မိမိ၏တရား၌ တစ်စုံတစ်ရာ ယုံမှားမှု ရှိလျှင် မိမိမလွန်မီ မေးလျှောက်ကြရန် သတိပေး၏။ သို.ရာတွင် ရဟန်းတို.က မည်သို.မျှမမေးလျှောက်ကြချေ။ ထို.နောက် ဗုဒ္ဓသည် "သင်္ခါရတရားတို.သည် ပျက်စီးတတ်သော သဘောရှိကုန်၏။ သင်တို.သည် မမေ.မလျော.ဘဲ ကျင်.ကြံအားထုတ်ကြကုန်လော" ဟု နောက်ဆုံးမိန်.ကြားပြီးလျှုင် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုတော်မူ၏။
ဗုဒ္ဓ၏ နောက်ဆုံးဘဝ ဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ပြသော မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်သည် အခြားသုတ်များထက် ရှည်လျား၍ အလွန်ထူးခြား မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော သုတ်ဖြစ်၏။ လောက၌ နဂိုမူလက စိတ်နှလုံးကောင်းရှိသော သူတို.သည်ပင် အိုမင်းသောအရွယ်၌ ကျန်းမာရေး များစွာယိုယွင်းပျက်ပြားမှု မရှိစေကာမူ အများအားဖြင်. စိတ်ဓာတ်ယိုယွင်းဆုတ်ယုတ်လာကြ၏။ ငါစွဲကြီးမား၍ သူတစ်ပါးအပေါ် ဆရာလုပ်လိုခြင်း၊ သူတစ်ပါးကို အပြစ်မြင်၊ အထင်အမြင်မသေးစေလိုခြင်း၊ (အရှင်သာရိပုတ္တရာအား မိန်.ကြားချက်) ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှု မဖြစ်စေလိုခြင်း စသော လက္ခဏာများဖြင်. မြင်.မားသော အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကို အထင်အရှား ပြသတော်မူခဲ.ပေ သည်။
သို.ဖြစ်၍ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ပညာရှင်တစ်ဦးက မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်မှာ ကမ္ဘာ.စာပေ၌ အခံ.ညားဆုံး စိတ်အားတက်ကြွဖွယ် အကောင်းဆုံးစာပေတစ်ခု ဖြစ်ပါပေ သည်ဟု ရေးသားခဲ.၏။ စင်စစ် မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၌ ဗုဒ္ဓသည် နှောင်းလူတို.က လွန်ကဲသော သဒ္ဓါယုံကြည်စိတ်ဖြင်.ဖန်တီးထားသော အနန္ဒဘုန်းတော်ရှင် မဟုတ်တော.ဘဲ အလွန်စိတ်ဓာတ်မြင်.မြတ်၍ ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသော ကမ္ဘာ.စံပြ အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်အဖြစ် ပေါ်လွင်ထင်ရှားလျက် ရှိပေသည်။
Posted by ကိုလူဩ at 4:17 PM
Kyaw Minn February 17, 2009 at 7:59 AM
Thar Du par, koe nyi yae